Muqdisho:-Waxaa maanta kulan isigu yimid golaha wasiirrada ee DFS waxaana kulankooda ay diirad ku saareen sidii loo adkeyn lahaa amaanka magaalada Muqdisho looguna sameyn lahaa ciidamo gaar ah waxaana sidoo kale kulanka ay wasiirada uga hadleen dhaqaalada ka soo xarooda dekedda iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho.
Kulankan Golaha wasiirada DFS ayaa waxaa shirgudoominayey Ra’iisul wasaaraha DFS Cabdi Faarax Shir-doon kulanka wasiirada ayaa waxay isla qaateen in 16 Degmo ee magaalada Muqdisho loo sameeyo ciidamo gaar ah oo madani ah lagana saaro ciidamada DFS ee isbaarada dhigta gudaha magaalada Muqdisho.
Wasiirka warfaafinta DFS Cabdullaahi Xirsi Ciil-mooge ayaa saxaafada la hadlay markii uu soo idlaaday kulankii golaha wasiirada ee DFS wuxuuna sheegay in ay dowlada ay sameyn doonto ciidamo gaar ah kuwaas oo sugi doona amaanka 16 degmo ee magaalada kuwaas oo ka madaxbanaan ciidanka melatariga ee dowlada .
Wasiirka Warfaafinta ee DFS ayaa sidoo kale sheegay in golaha wasiirada ay ka wada hadleen sidii loo dar-dargelin lahaa howlaha dekedda iyo garoonka diyaaradaha ee Aden Cadde si dhaqaalaha ka soo baxa ay dowlada u maareyso .
Wasiirka DFS Cabdullaahi Xirsi Ciil-mooge ayaa sheegay in Degmo walba oo ka tirsan magaalada Muqdisho la geyndoono 100 askri oo suga amaanka wuxuuna sheegay in dowlada ay maanta qaaday Isbaarooyinkii yaalay magaalada Muqdisho.